Blog - Fivarotana an-tserasera CBD
Delta 8 & Delta 10 THC NEWS, New'sBy james baines Septambra 1, 2021
Afaka manampy anao hihena ve ny Delta 8 THC? Lahatsoratra navoaka voalohany tao amin'ny. https://hightimes.com/sponsored/8-reasons-to-try-delta-8-thc-before-its-too-late/?amp Delta-8 THC dia nisondrotra ny lazan'i THC, saingy toa isaina ny androny. Na dia ara-dalàna amin'ny sehatra federaly aza ny Delta-8 THC, dia mihamaro ny fanjakana mandrara na mametra ny fivarotana azy manerana an'i Etazonia. Raha mbola afaka mividy Delta-8 THC ianao…
Agent GPFN Q DecodesBy james baines Aogositra 31, 2021
Tatitry ny fitsikilovana isam-bolana an'ny Agent Freak Nasty Aza adino ny mizara amin'ny namanao na milaza fotsiny izy ireo fa handeha any ENGINE FITSARANA IZAO ary manorata Agent Freak Nasty ho an'ny ankamaroan'ny #SpookPorn. Azonao atao ihany koa ny manaraka ahy ao amin'ny TWITTER @ laconic93 Betsaka ny azontsika atrehana amin'ity volana lasa ity, ny…
Agent GPFN Q DecodesBy james baines Jolay 26, 2021
Miarahaba, namana ary snitches ity mpijirika SPOOK manodidina anao eo an-toerana alias Agent Freak Nasty mandefa ny SIGNAL PIRATE ahy avy any DEEP ao ambadiky ny làlan'ny fahavalo. tatitra isam-bolana. Amin'izany no ahazoako manamboatra anao #SPOOKPORN…
Agent GPFN Q DecodesBy james baines Jona 28, 2021
Miarahaba. Ity tatitra Intel ity dia ho iray hafa tsara. Mifantoka amin'ny tatitra avy amin'ny RealRawNews.com sy loharanom-baovao hafa. Ho anao izay tsy mahalala an'i Dr. Piecznick dia TOKO SUPER. Ny mpanoratra Tom Clancy dia nametraka ny toetrany an'i Jack Ryan taorian'ny asa fitoriana nataony. Raha nahita ny sarimihetsika ianao, Hunt For Red Oktobra,…
Delta 8 & Delta 10 THC NEWSBy james baines Jona 19, 2021
Ny fanjakan'i Texas dia manome ara-dalàna ny vokatra Delta 8 & Delta 10 THC Nosoratan'i: Eran Hami Posted at 8:56 PM, 07 2021 8 Last updated 21:07 PM, Jun 2021, 8 CORPUS CHRISTI, Texas - Ilay antsoina hoe "Diet Ny fanafody «tsimparifary» dia hijanona ho ara-dalàna ao amin'ny fanjakan'i Texas. Delta XNUMX miaraka amin'ny THC hafa…
UncategorizedBy james baines Jona 16, 2021
Dosis lehibe an'ny CBD dia manampy ny Rodents hampihena ny fidiran'ny Meth. Fikarohana vaovao iray ao amin'ny Journal of Psychopharmacology dia manome porofo fa ny cannabidiol, singa iray amin'ny rongony, dia afaka manakana ny antony manimba ny methamphetamine amin'ny voalavo. Ny valim-pikarohana vonjimaika dia manondro fa mety hahasoa ilay zavatra entina miady amin'ny fiankinan-doha amin'ny methamphetamine, izay nanjary iray amin'ireo fahita indrindra…
CBD ho an'ny fanarenana ny hozatra
Lahatsoratra iraisan'ny Emperora MenaBy james baines Jona 16, 2021
Ny CBD ho an'ny fanarenana ny hozatra Cannabidiol fantatra amin'ny anarana hoe CBD dia nanjary nalaza kokoa satria ny vahoaka dia manomboka mahatsapa ny tombotsoan'ny mpiara-miasa THC tsy psychoactive izay azo ampiasaina amin'ny fanarenana hozatra aorian'ny fampiofanana. Hita hatraiza hatraiza ny CBD tato ho ato. Afaka mahazo azy amin'ny cookies, kafe, menaka tincture ianao,…
CBD menaka ho an'ny fanaintainana
New'sBy james baines Jona 16, 2021
CBD menaka ho an'ny fanaintainana Ity lahatsoratra ity dia natao ho fanabeazana sy fampahalalana ihany. Ity lahatsoratra ity dia tsy natao hanomezana torohevitra ara-pitsaboana na hanoloana ny torohevitra ara-pitsaboana an'ny dokotera voalohany. Ny mpijery rehetra an'ity lahatsoratra ity dia asaina manatona amin'ny dokoterany na matihanina amin'ny fahasalamana. Redemperorcbd.com na ireo orinasan-dray aman-dreny no mandray andraikitra amin'ny…
CBD sy ny krizy opioid
Ny tatitra vaovao nozaraina nandritra ny herinandro lasa teo dia nanolotra vaovao vaovao momba ny fomba nahazoan'i cannabidiol ny rongony, raha tsy izany dia antsoina hoe CBD, dia afaka nanampy tamin'ny fanaraha-maso ny voka-dratsin'ny zava-mahadomelina eran-tany. Ny vokatry ny fizahana natao tamin'ity herinandro ity tao amin'ny American Journal of Psychiatry dia nanolotra fa ny CBD dia afaka manampy amin'ny fihenan'ny fikorontanana sy ny faniriana niainana…
Ny homamiadana dia "mamono tena amin'ny fihinanan-tena" aorian'ny fihanaky ny rongony
Christina Sanchez, biolojika molekiola avy ao amin'ny University Compultense any Madrid, dia nitatitra voalohany tamin'ny 1998 fa ny TetraHydroCannabinol (THC), izay singa psychoactive voalohany amin'ny rongony, dia mitarika famonoan-tena ho an'ny sela fivontosana ary mamela ireo sela tsy fivontosana mahasoa fotsiny. Hitany fa rehefa tratry ny THC, ny sela fivontosana dia tsy nitsahatra nitombo sy nihabetsaka fotsiny fa nanimba ny tenany ihany koa, na tao amin'ny laboratoara…